Antoine Griezmann oo sheegay halka uu kusoo gabo-gabeyn doono kubadda cagta & goorta uu ka tagayo Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 20 Juun 2021. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Barcelona ee Antoine Griezmann ayaa sheegay inuu kooxdiisa ka dhaqaaqi doono marka uu dhammaado qandaraaskiisa bisha June ee sanadka 2024 isagoo hadalkiisa raaciyay inuu kubadda cagta uga fariisan doono horyaalka Mareykanka ee MLS.
Laacibkan ayaa Camp Nou usoo dhaqaaqay xagaagii 2019 markaas oo uu kasoo tagay naadiga Atletico Madrid, balse waxa uu Barca kula soo guuleystay kaliya tartanka Copa del Rey.
Kahor inta uusan ka hadlin rabitaankiisa ka ciyaarista dalka Mareykan, Griezmann ayaa sheegay inuu ku rajo weyn yahay inuu Blaugrana kula guuleysto tartanka Champions League iyo horyaalka La Liga.
“Qandaraaskeyga Barcelona waxa uu socon doonaa ilaa 2024, waxaana markaas kaddib ayaan u maleynayaa inay tahay xiliga ugu habboon ee ay tahay inaan aado Mareykanka” ayuu yiri Griezmann kahor ciyaartii xulkiisa ay barbarraha la galeen xulka Hungary u sheegay saxaafadda.
“Waan jeclahay dalkan, dhaqankan, ciyaarta NBA (kubadda koleyga) iyo rabitaanka inaan wax soo ogaado ee i hagaya, balse qoys ayaan leeyahay.
30-sano jirkan ayaa sidoo kale hadalkiisa kusii daray inuu jeclaan lahaa inuu halkaas ku dhammeysto xirfaddiisa kubadda cagta marka uu dhaco heshiiska uu kula jiro Barcelona.